Andapa: Potiky ny Fitsaram-bahoaka ny biraon’ny Zandary
jeudi, 25 octobre 2018 23:17
Tsy mora ny tranga nisy teto Andapa omaly, toy izao ny zavatra navelan’iny sakoroko iny.
Manomboka voafehy ny fandriam-pahalemana hatramin’ny nahatongavan’ny Kaomandin'ny Kaompanian'ny Zandary, Kapiteny Maguy Raharimandina omaly hariva.
Vao tonga ireo ekipa avy any Sambava dia nandeha nandrava ireo andian’olona nandoro kodiarana teny amin’ny lalam-pirenena miazo ny biraon'ny Zandary. Vao rava izay dia natao faritra mena avy hatrany mba hisorohana izay tranga mety hiseho.
Nitondra fanazavana ihany koa ny avy amin’ny Zandary fa efa nanao fampitandremana imbetsaka fa tsy nihemotra ny olona. Tsy ninianay ny hitifitra fahatany ny olona fa hitantsika amin’izao zava-misy izao ny zavatra niseho, hoy hatrany ny fanazavana ary Zandary iray naratra teo amin’ny tanany.
Momba ireo izay niharan'ny fitifirana kosa dia roa namoy ny ainy araka ny vaovao ofisialy. Fito no mbola tazonina eny amin’ny hopitaly, ka renim-pianakaviana iray voatifitra no tsaboina ato amin’ny hopitalibe Andapa, ary ny enina any amin’ny hopitaly Advantista Sahamazava ka ny roa nampidirina Bloc Opératoire nandalo fandidiana androany izao.
(Sary Gasypatriote Sambava)